Ahoana ny famelana heloka ny olona: maodely roa mifototra amin'ny siansa momba ny famelana heloka - Fifandraisana
Ahoana ny famelana heloka ny olona: maodely roa mifototra amin'ny siansa momba ny famelana heloka
Rehefa misy olona manao zavatra manafintohina anao, na miteraka fanaintainana sy alahelo aminao, ahoana no hamelanao ny helony?
Fanontaniana napetraktsika rehetra tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainantsika.
Na lehibe na kely ny ratsy, dia mino izahay fa ny famelan-keloka no lalana tokony hatao.
Tsy mora foana ny mamela.
Raha ny marina, ny famelana heloka ny olona iray izay nandratra anao dia mety handany fotoana sy ezaka be.
Mahatsiravina izaitsizy ny fihetsika sasany ka afaka mandany fiainana mandalo. Ary mety tsy ho tanteraka tanteraka ny famelan-keloka.
Mety ho sarotra ny mamela heloka. Na ny fandraisana dingana amin'ny lalana tokony haleha aza dia afaka manome tombony lehibe ara-pihetseham-po sy ara-batana.
Soa ihany fa nisy fandalinana siantifika lehibe momba ny fomba fiasan'ny famelan-keloka.
Ity lahatsoratra ity dia hitrandrahana modely roa be mpampiasa indrindra momba ny famelan-keloka:
1. Ny maodely fandefasana famelan-keloka marina
2. Ilay maodelin'ny famelan-keloka ao Worthington REACH
Ireo maodely ireo dia naseho mba hanampiana ny olona hamela heloka haingana kokoa kokoa noho ireo izay tsy manaraka maodely.
Fa aleo aloha mametraka fanontaniana lehibe…
Inona no atao hoe famelan-keloka?
Rehefa miteny isika fa mamela ny heloky ny olona iray, inona no tena tiantsika holazaina?
Sarotra noho ny nieritreretanao ny mahita valiny amin'io fanontaniana io.
Ny famelan-keloka dia tsy fihetsika tokana. Tsy zavatra ataonao tsotra fotsiny izany.
Ny psikology dia namaky ny famelan-keloka ho roa:
1. Famelana heloka.
Anisan'ny dikan'ny hoe mamela heloka ny fanapahan-kevitra tsy hamaly faty na hamaly faty.
Matetika io no lafiny mora kokoa amin'ny famelan-keloka satria mifandraika amin'ny karazan'olona tiantsika hahatongavantsika.
Na dia nisy nanao ratsy tamintsika aza, ny tondro ara-pitondrantenantsika ary tena hevitra Midika izany fa tsy hitantsika izany hoe hahatonga ny olona hitovy fanaintainana amin'ny valiny.
'Ny maso solon'ny maso dia manajamba an'izao tontolo izao' dia fiteny mahazatra izay manondro fa ny valifaty amin'ny fandikan-dalàna dia manimba ny olona rehetra ihany amin'ny farany.
Noho izany, ho valin'ny fanararaotana antsika dia manapa-kevitra izahay fa tsy hiezaka ny hiverina any aminy.
maninona no mpandainga no mandainga sy misoloky
Ho hitantsika kosa ilay nanao ratsy ho olona mendrika fitsaboana ara-drariny.
2. Famelana heloka.
Ny lafiny faharoa amin'ny famelana heloka dia ny famotsorana ireo fihetseham-po ratsy manoloana ny mpanao ratsy sy ny tsy fanao.
Ny famelan-keloka dia azo heverina ho nomena fa tsy misy fihetseham-po ratsy intsony rehefa misy fihetsehana tsy miandany amin'ny olona iray.
Na, azo lazaina fa ny famelan-keloka dia mitranga rehefa afaka miverina ireo karazana fahatsapana nanananao taloha.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha nahatsapa hafanana tamin'ny olona iray ianao talohan'ny zavatra tsy nety nataony dia mahatsapa hafanana iray mitovy amin'izy ireo ianao raha vantany vao nisy ny famelan-keloka feno.
Ity no ampahany mazàna maharitra maharitra kokoa.
Tsy afaka mamolavola mora foana ny fihetsem-ponao toa ny fanapahan-kevitrao ianao.
Na dia mety mitaky anao hanaikitra ny lelanao na hiadiana amin'ny fanentanana aza ianao, ny fanapahan-kevitra tsy hamaly faty dia zavatra azonao atao amin'ny fahatsiarovan-tena.
Ny fanodinana ny fiatraikany ara-pihetseham-po amin'ny zavatra ratsy dia mitaky fotoana sy asa bebe kokoa.
Ny famelana heloka dia mitaky fanafoanana ny fahatsapana tsy mamela heloka.
Lolom-po, hatezerana, fankahalana, mangidy , tahotra - Tsy mora foana ny miasa amin'ireo sy ny fihetseham-po hafa izay tazominao ho an'ny mpanao ratsy na ny tsy mety.
Raha mafy na maharitra ny tsy mety natao dia mitaky fanampiana matihanina matetika ny asa takiana amin'ny fikirakirana sy fiatrehana ireo fihetsem-po ireo.
Araka izany, azo atao tsara ny miaina famelan-keloka tampoka ary mbola mitazona ny tsy famelana heloka mandritra ny fotoana maharitra.
Inona ny famelan-keloka dia TSY.
Matetika ny olona dia misavoritaka amin'ny famelana heloka amin'ny famelana olona iray “hiala amin'ny farango”.
Tsy misy amin'ireto zavatra ireto ny famelan-keloka:
1. Manadino - na dia mety ho tonga saina amin'ny fanaovan-dratsy aza ianao, dia tsy tokony hadinoinao fa nitranga izany.
Raha ny tena izy dia tsara kokoa ny mahatadidy ny tsy nety nataonao na mety ho maloto amin'ilay zavatra mitovy ianao amin'ny tsy fanesorana ny tenanao amin'ny toe-javatra sasany na hijoro ho anao.
2. Condoning - tsy mila manaiky ny tsy mety ianao raha tsy maninona.
Ary tsy manome alalana ny mpanao ratsy ianao hitondra tena amin'ny fomba mitovy indray, aminao na amin'ny olon-kafa.
3. Mandà / manamaivana - tsy mila mandà ny hamafin'ny fandikan-dalàna ianao.
Eny, mety ho afaka hiala aminy am-pientanam-po ianao, saingy tsy mampihena ny fanaintainana na fanaintainana izany.
4. Famelan-keloka - Ny famelana heloka dia tsy midika hoe tsy afaka mitady fahamarinana amin'ny zavatra nataony ianao.
Raha mety dia azonao atao ny mampihatra ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina misy anao.
5. Fampihavanana - mamela heloka MEY ampandraiso fanamboarana ny fifandraisana efa simba noho ny fanaovan-dratsy, saingy tsy mila famelan-keloka izany.
Mety mamela heloka ianao ary mbola tsy maniry ny hanana an'io olona io amin'ny fiainanao intsony.
6. Famoretana - rehefa mandratra anao ny olona iray dia mahatsapa izany fahatsapana izany. Ny famelan-keloka dia tsy mitaky anao hanosika izany fahatsapana izany hidina ao amin'ny lakan'ny sainao tsy mahatsiaro tena.
Araka ny efa nodinihintsika, ny famelan-keloka ara-pihetseham-po dia midika hoe famotsorana ireo fahatsapana ratsy izay nifampiraharaha tamin'izy ireo.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny famelan-keloka
Mety manontany tena ianao hoe maninona ianao no tokony hanelingelina ny fiezahana hamela ny heloky ny olona iray amin'ny zavatra nataony.
Voalaza matetika fa ny famelana heloka dia ho anao, ilay mpamela heloka kokoa noho ny an'ny mpanao ratsy.
Ary tena marina izany.
Ny famelan-keloka dia tsy ilaina afa-tsy rehefa misy olona mahatsapa alahelo amin'ny fihetsiky ny hafa.
Ny fanafoanana an'io fanaintainana io no antony lehibe tokony hanandramanao mamela ny helok'ireo izay nandratra anao.
Ny siansa hatreto dia manamafy io fomba fijery io.
Fitsabahana amin'ny famelan-keloka naseho mba ho fomba mahomby amin'ny ady amin'ny voka-dratsin'ny fihetsika ara-batana sy ara-pihetseham-po.
Na dia miovaova be aza ny toe-javatra tsirairay, ny famelan-keloka dia mety hisy vokany tsara amin'ny fahatezerana, tebiteby, alahelo, fihenjanana aorian'ny traumatis, famoizam-po, tosidra, ary fanaintainana ambany aza.
Tamin'ny 2015, nisy ny fijery feno indrindra momba ny angona manodidina ny famelan-keloka sy ny tombotsoany amin'ny fahasalamana sy fahasalamana .
Mazava ho azy fa tsy ilaina ny mamaky fikarohana toy izany mba hahalalanao fa ny fizotran'ny famelana heloka amin'ny olona iray dia mety hahasoa anao tokoa.
Ahoana no famelana heloka?
Ankehitriny rehefa manana fiaviana kely momba ny atao hoe famelan-keloka sy ny tsy izy ianao, ary mahatakatra ny tena tombony ara-pahasalamana amin'ny fikatsahana famelan-keloka, andao hahay hampiharina kokoa.
Raha misy modely maromaro hanampiana ny olona hahita famelan-keloka ao am-pony sy ao an-tsainy, maodely roa toy izany no resahina matetika.
Ny maodely fandefasana famelan-keloka marina
Ity modely ity dia notontosain'i Robert D. Enright Ph.D, mpikaroka ary mpampianatra ao amin'ny University of Wisconsin-Madison .
Mpisava lalana amin'ny fikarohana siantifika momba ny famelan-keloka izy ary namariparitra ny maodely famelana nataony tamin'ny 1985.
Dr. Enright dia mamaky ny famelan-keloka amin'ny dingana efatra. Ao anatin'ireto dingana ireto dia misy dingana 20 sasany izay mamorona làlana mankany amin'ny famelan-keloka.
Ny fomba feno dia voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny bokiny Safidy ny famelan-keloka , fa ity misy topy fohy.
1. Dingana tsy manafina.
Inona no nitranga ary inona no tsapako momba izany?
Ireo no fanontaniana lehibe tokony hovalianao amin'ity dingana ity.
triple h voaroaka avy any wwe
Alohan'ny hisian'ny famelan-keloka dia tokony hazava tsara ny tena famelana heloka.
Ilainao ny mamaly ireto fanontaniana ireto: Iza? Inona?
Iza no nandratra anao? Iza amin'izy ireo ianao - namana, mpiara-miasa, mpiara-miasa, vahiny, vondrona?
Inona no nataon'izy ireo mba handratra anao? Inona no fihetsika nitranga? Inona no voalaza? Inona avy ireo toe-javatra manodidina an'io fihetsika io?
Manaraka izany, mila mandinika ny fiantraikan'ity fihetsika ity ianao.
Inona avy ireo voka-dratsin'io fihetsika io? Izany dia mety misy ratra ara-batana na fahavoazana, misy fiatraikany amin'ny toe-bolanao, ny famoizana asa, ny fahatapahan'ny fifandraisana.
Inona no vokatr'izany? Inona no fiantraikan'ny fihetsika teo amin'ny fiainanao ara-tsaina sy ara-pihetseham-po?
Mety tafiditra ao anatin'izany ny fihetseham-po isan-karazany toy ny henatra, fahatezerana ary fahatsapana ho meloka.
Na mety niteraka fanahiana, famoizam-po, na aretina ara-tsaina hafa.
Angamba ianao manana eritreritra be loatra momba ilay nanao ratsy na ilay ratsy. Na mijaly amin'ny nofy ratsy momba izany ianao.
Ary ahoana no nanovan'ny fihetsika anao ny fahitanao an'izao tontolo izao? Efa bebe kokoa ve ianao izao tsy matoky sa pessimiste?
Ity dingana ity dia antsoina hoe ny fizarana lamba satria tsy maintsy ataonao tsara izany: esory arak'izay azonao atao ny zavatra tsy nety nataony sy ny fiantraikany teo aminao.
Matetika dia miteraka alahelo ara-pihetseham-po ny fiatrehana ireo zavatra ireo.
2. Dingana fanapaha-kevitra.
Manomboka amin'ny ankapobeny ity dingana ity rehefa tsapanao fa tsy mandeha ny zavatra ataonao.
Ny ezaka ataonao hatreto mba handresena ny fanaintainana izay tsapanao dia tsy nahazo valiny ary reraky ny fahatsapana ho voaozona ratsy foana ianao.
Ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao dia ny manandrana manomboka ny famelana ny heloka amin'ny olona izay nandratra anao.
Tsy mbola mila mamela azy ireo ianao, saingy mila manaiky fa ny famelana heloka no fomba hahatsapanao ho salama indray.
Ity fanapahan-kevitra ity dia fanapahan-kevitrao handray ny fiainanao amin'ny lalana tsara kokoa noho ny fanapahan-kevitra raiso taminao.
Ity dingana fanapahan-kevitra ity dia mifandraika amin'ny famelana heloka vonjimaika noresahina teo aloha. Mitaky anao tsy hanaiky ny faniriana valifaty na valifaty izany.
Ahoana ny famelana ny hatezerana: ireo dingana 7 manomboka amin'ny hatezerana hivoaka
Maninona ny olona sasany tsy mifona velively na miaiky fa diso (sy ny fomba hiatrehana azy ireo)
3. Dingana asa.
Ny famelana ny fahadisoana kely dia mety ho tonga ara-dalàna rehefa mandeha ny fihenan'ny toe-pihetseham-po.
Amin'ny toe-javatra izay nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainanao sy ny fihetseham-ponao ny asa ratsy dia takiana ny asa mba hamelana heloka.
Ny tapany voalohany amin'ny asa toy izany dia matetika miendrika fanovana ny fomba fahitanao ilay olona nanao ratsy anao.
Mety hidika izany fa ny fijerena ny zavatra ataon'izy ireo na ny teny maharary amin'ny fiaviany sy ny antony mety nitondran'izy ireo ny fitondran-tenany.
Nisy fiantraikany ve ny fihetsik'izy ireo tamin'ny fahazazany sahirana manokana na tamin'ny ohatra ratsy napetraky ny ray aman-dreniny mpikarakara?
Sahirana be ve izy ireo rehefa nandratra anao?
Ahoana no mety hahitanao ny any ankoatry ny fihetsika mihitsy ary hahitanao ilay nanao ratsy ho olombelona tsy lavorary?
Ahoana no mety hisaintsainanao ny lesokao sy ny fotoana nahararanao ny hafa hahita ny mpanao ratsy azy amin'ny fomba hafa?
Raha vantany vao afaka mahita azy ireo amin'ny hazavana vaovao ianao dia afaka mandray fepetra hanombohana ny dingan'ny fahatsapana fiaraha-miory amin'izy ireo.
Ary ny fiaraha-miory matetika dia mitarika fahatsapana tsara kokoa amin'ilay nanao ratsy. Azo antoka fa manampy amin'ny fihenan'ny fahatsapana ratsy mety hitranga amin'izy ireo izany.
Ny fanekena ny ratra naterak'izany dia dingana iray lehibe koa tokony hatao amin'ity dingana ity. Zava-dehibe ny mahatadidy fa io fanaintainana io dia tsy misy antony sy mendrika mihitsy.
Ny fanaintainana tsapanao fotsiny. Ny fanaintainana nihatra taminao.
Ity dingana ity dia mety misy na tsia ny fampihavanana eo aminao sy ilay olona nandratra anao.
Raha irinao ny hitohizan'ny fifandraisana dia izao no fotoana hanombohana ny dian'ny zaza fananganana ny fahatokisana sy fanajana, ary amin'ny toe-javatra sasany ny fitiavana nisy.
4. Dingana lalina.
Amin'ity dingana farany ity dia tonga ny fahatsapana fa ny famelan-keloka dia manome famotsorana ara-pientanam-po.
Hitanao fa mila mamela ny heloky ny olona nandratra anao ianao.
Miala ny fihetseham-po ratsy mifandraika amin'ny zavatra tsy mety, angamba efa lasa tanteraka mihitsy aza.
Eo amin'ny toeran'izy ireo, mety hanomboka hihevitra ny fanaintainana sy ny fijaliana niainanao ianao ho fotoana lehibe nanovana ny fiainanao.
Mety ho hitanao ny dikany izay tsy teo alohan'ny asa ratsy. Tsy dia misy antony loatra amin'izany, fa ny vokany tsara.
Matetika ny fitomboana dia tonga mandritra ny fotoan-tsarotra indrindra amin'ny fiainantsika ary azonao atao ny mijery ity fizarana ity ho toy ny antony manandanja amin'ny fitomboanao manokana.
Mety ho hafa mihitsy ny fijerinao ny fiainanao sy ny fihetsikao ary manapa-kevitra ianao fa mila mitady famelankeloka amin'ny hafa.
Ity topy maso ity dia tsy afaka manome ny rariny ny fizotrany feno izay novolavolain'i Dr. Enright.
Raha te hianatra momba sy hampihatra ny maodeliny feno ianao dia manoro hevitra anao izahay hamaky ny bokiny Safidy ny famelan-keloka .
Ity modely ity dia noforonin'i Everett Worthington Jr., Ph.D., a mpampianatra efa misotro ronono ao amin'ny Oniversiten'i Commonwealth Virginia .
Niasa teo amin'ny sehatry ny famelan-keloka izy hatramin'ny 1990 ary manana antony manokana manohy ny ezaka nataony - ny famonoana ny reniny tamin'ny 1996.
Ny teny hoe REACH dia fanafohezana ny litera tsirairay maneho ny dingana iray amin'ilay maodely.
Andao jerena tsirairay izy ireo.
R = Mampatsiahy
Ny dingana voalohany dia ny mieritreritra ny zava-nitranga nandratra anao.
Miezaha ihany hitazona ny fahitana ao an-tsainao ho zava-kendrena araka izay azo atao.
Mifikitra amin'ny zava-misy: ny fihetsika, ny teny noresahina.
Nefa aza asiana marika ireo zavatra ireo.
Ilay olona nanao ratsy taminao dia tsy a ratsy olona. Olona fotsiny izy ireo.
Tsy ianao no iharan'izany. Olona hafa fotsiny ianao.
Ny ratsy dia tsy mihoatra ny andiana hetsika.
E = Mangoraka
Na dia sarotra aza izy io, dia miezaha hiditra amin'ny kiraron'ilay nanao ratsy.
Raha anontaniana izy ireo hoe nahoana izy ireo no mandratra anao, inona avy ireo antony mety nomeny? Inona no antony nanosika azy ireo?
Inona avy ireo toe-javatra manodidina ny zava-dratsy ary inona no mety ho vokatr'izany?
Inona no tsapan'izy ireo tamin'io fotoana io?
Jereo raha misy antony tokony hahatsapana fangorahana sy fahatakarana amin'izy ireo.
Anontanio izay mety ho nataonao tamin'ny toe-javatra mitovy amin'izany. Valio ny marina.
A = Fanomezana Altruistic
Amin'ity modely ity, ny famelan-keloka dia heverina ho fanomezana omena ny mpanao ratsy amin'ny fomba fijery tsy misy fitiavan-tena.
Dingana sarotra ity, saingy tsotra ny antony ao ambadik'izany.
Diniho ny fotoana iray izay nandraranao olona hafa na nahatonga anao hanana olana lehibe, ary navelany izany.
Ahoana no nahatsapanao izany?
Feno fankasitrahana ve ianao? Nahazo aina? Faly? Milamina?
Eritrereto indray izao ny fotoana namelana heloka teo aloha tamin'ny olona iray sy ny fahatsapanao izany.
Mahatsiaro maivana kokoa ve ianao, toy ny hoe nesorina ny enta-mavesatra iray? Mora kokoa, tsy misy korontana anatiny?
Diniho izao ny ratsy natao. Noho ianao voavela heloka noho ny ratra nataonao teo aloha dia anontanio raha mendrika ny hahazo fahasoavana toa io olona io ve ianao?
Ary ny fahafantarana fa ny famelana heloka tamin'ny lasa dia nahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa, azonao atao ve ny manolotra an'ity fanomezana ity amin'ity toe-javatra ity?
C = Fanoloran-tena
Vantany vao tonga amin'ny fotoana ahatsapanao fa vonona hamela ny heloky ny olona nanao ratsy ianao, dia manolora famelana ho azy.
Ahoana no anaovanao an'io?
Soraty ao anaty diarinao izany.
fitiavana isika, raisina ho azy isika
Lazao amin'ny namanao fa nifidy ny hamela heloka ianao.
Manorata taratasy famelan-keloka ho an'ilay olona nahatonga ny ratra (tsy voatery hanome azy ireo akory ianao).
Ireto zavatra tsotra ireto dia miady amin'ny famelana heloka. Mampahatsiahy anao izy ireo fa nanolo-tena hamela ilay olona.
H = Mihazona famelan-keloka
Ny dingana teo alohan'ny fanekena ny famelana heloka amin'ny fomba mivaingana dia manampy anao hihazona izany famelan-keloka izany rehefa mety mihozongozona ianao.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa eo am-pelatananao ny famelan-keloka. Manana fahefana hisafidy izay fihetsem-po avelanao hifehezana ny sainao ianao.
Ity dia fampahatsiahivana tena ilaina indrindra rehefa miatrika zavatra mety hiteraka fahatsiarovana ny ratra sy fanaintainana niaretanao.
Mety hanampy ihany koa izany raha mieritreritra ny zavatra tsy nety foana ianao.
Mandritra ny fahatsiarovana izany dia hisy foana, azonao atao ny milaza amin'ny tenanao fa ny fahatsapana niainanao noho ireo fahatsiarovana ireo dia tsy ny famelana ny famelana ny helokao.
Tsy mamela izany olona izany ianao. Ireo fahatsapana ireo dia lesona izay afaka manampy anao tsy haratra amin'ny fomba mitovy indray.
Mamerina ireo dingana.
Ny maodely REACH dia tsy zavatra lalovanao indray mandeha.
Ary ny famelana heloka ara-pihetseham-po ataonao dia mety tsy ho feno fihodinana voalohany.
Saingy amin'ny alalàn'ny fandalovana ireo dingana imbetsaka dia manohy mampihena ny fahatsapana ratsy ianao.
Ary azonao atao ny mampitombo ny fahatsapana tsara izay mety tsapanao amin'ilay nanao ratsy - ny fiaraha-miory sy ny fangorahana - mandra-pahatongany manjaka kokoa noho ny fihetseham-po ratsy.
Raha te hahalala momba ny maodely REACH amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia azonao atao ny manondro ny bokin'i Dr. Worthington Famelan-keloka sy fampihavanana: tetezana amin'ny fahalavorariana sy fanantenana .
Ho fanampin'izany, manolotra boky fiasa marobe amin'ny tranokalany izay azonao sintonina maimaimpoana izy. Ireo dia misy fanazaran-tena betsaka hanampy anao amin'ny làlan'ny famelana heloka.
Ireto boky fiasana ireto dia hita eto: http://www.evworthington-forgiveness.com/diy-workbooks
Misy azo avela ve?
Indraindray ny olona manao zavatra mahatsiravina sy mahatsiravina amin'ny hafa.
Tena mahazo famelan-keloka ve ireo olona ireo sy ireo fihetsika ireo?
Ny valiny fohy dia: eny, mety ho izy ireo, saingy matetika izy ireo dia tsy tanteraka.
Ny zavatra tadidio voalohany dia ny famelan-keloka tsy miseho tampoka. Ho an'ireo fandikan-dalàna lehibe indrindra, dia mety haharitra mandritra ny androm-piainana iray izany.
Saingy ny dingan'ny famelana heloka toy ny voalaza ao amin'ireo maodely roa etsy ambony dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny hamafin'ny fahatsapana ratsy mety hotazominao.
Azonao atao ny mamakivaky ireo modely ireo hatrany hatrany, ary isaky ny manampy anao hanakaiky kokoa hamela heloka tanteraka ianao.
Fa zava-dehibe ny tsy hikapoka ny tenanao raha tsy afaka mamela heloka tanteraka ianao.
Ary na dia misy olon-kafa aza manambara fa namela heloka hafa (angamba olona ao amin'ny vondrona mpanohana), tsy tokony hahatsapa ho tsy fahombiazana ianao noho ny tsy fahafahanao mamela ny tsy nety natao taminao.
foana manehoa hatsaram-panahy amin'ny tenanao . Malemy paika ary ekeo fa lava sy sarotra ny fizotrany.
Na mahatratra ny fiafarany tsara ianao na tsia, dia afaka manandrana mihetsika miadana amin'ny lalana marina ianao.
Isaky ny dingana tsirairay dia mety hahatsapa ho salama tsara ianao.
ahoana no hahalalanao raha manintona anao izy
raiki-pitia ahoana no ahafantaranao
rahoviana no hivoaka 2k22
kurt zoro Jason jordan zanakalahy